အဖြစ်အပျက်အိမ်ရှင်မအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်အတွက်အကြံပြုချက်များ6ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ
Maite Nicuesa | 09/06/2021 20:51 | အဆင့်မြှင့်တင် 09/06/2021 22:18 | အလုပ်ထွက်
ပွဲတစ်ခုအိမ်ရှင်အဖြစ်သင်လုပ်လိုပါသလား။ ၎င်းသည်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများစွာကိုပေးသည့်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လေ့ကျင့်ရေးနှင့်လေ့လာရေးတွင်သင့်တွင်အဖြစ်အပျက်အိမ်ရှင်မအဖြစ်အလုပ်လုပ်ရန်အကြံပြုချက်ခြောက်ခုရှိသည်။
1 ၁။ သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်သင်၏ဖုံးစာကိုရေးပါ
3 ၃။ ပွဲစီစဉ်အိမ်ရှင်၏အေဂျင်စီများ
4 ၄။ ပွဲကြည့်အိမ်ရှင်များအတွက်အလုပ်ကမ်းလှမ်းသည်
5 5. ဝိုင်းနှင့်ညီလာခံ၏ပြက္ခဒိန်
6 ၆။ သင်ကိုယ်တိုင်ကွဲပြားစေရန်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုဖန်တီးပါ
မည်သည့်အခြားအလုပ်အကိုင်၌ရှိသကဲ့သို့, တစ် ဦး သောင်မတင် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း Vita စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ဤကဏ္inတွင်အလုပ်ရှာဖွေမှုကိုတိုးမြှင့်ရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်ဖော်ပြထားသောသင်တန်းနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုရည်မှန်းချက်နှင့်ကိုက်ညီရမည် အဖြစ်အပျက်အိမ်ရှင်မအဖြစ်အလုပ်လုပ်မှ။
ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်တန်ဖိုးမကြီးသောသင်တန်းများကိုမထည့်ပါနှင့်။ ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ရပ်များရှိပါတယ်။ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်များသည်တက္ကသိုလ်များတွင်မကြာခဏတက်ရောက်လေ့ရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကုမ္ပဏီများသည်လည်းကော်ပိုရိတ်ဖြစ်ရပ်များကျင်းပ။
အထူးလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးခြင်းသည်တံခါးဖွင့်ပေးသောကြောင့်ဤဝိသေသလက္ခဏာများအစီအစဉ်သည်ဤအလုပ်အကိုင်တိုးတက်လိုသူများအားလေ့ကျင့်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်သူများပြသရမည့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အရည်အချင်းများစွာရှိသည်။ ဘာသာစကားအသိပညာသည်သော့ချက်ဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တက်ရောက်သူအချို့သည်အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်သို့မဟုတ်ဂျာမန်စကားပြောနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထူးချွန်မှုကိုပြသည် အကောင်းဆုံးဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေးသောသူတို့၏အမျိုးအ။
ဤကဏ္inတွင်အထူးပြုထားသောစီမံကိန်းများရှိပါသည်။ မတူကွဲပြားသောဖြစ်ရပ်များအတွက်ပရိုဂရမ်များတွင်ပူးပေါင်းပါ ၀ င်ပြီးသင်၏အဖုံးစာကိုပေးပို့ရန်သင်၏ CV ကိုသင်ပေးပို့နိုင်သည့်အေဂျင်စီများ။ အင်တာနက်မှတဆင့်ကွဲပြားသောအေဂျင်စီများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ စီမံကိန်းတစ်ခုချင်းစီ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်နှင့်လူမှုကွန်ယက်များကိုစစ်ဆေးပါ။ သင်ရှင်းလင်းလိုသည့်မေးခွန်းများရှိပါကအေဂျင်စီ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဤရည်ရွယ်ချက်များအတွက်နည်းလမ်းများဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။
အွန်လိုင်းအလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုသည်တက်ကြွသောအလုပ်ရှာဖွေမှုတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအွန်လိုင်းလိုင်းများနှင့်မကြာခဏတိုင်ပင်ခြင်းအားဖြင့်သင်အထူးကြော်ငြာများကိုရှာနိုင်သည်။ ထို့နောက် အလုပ်အသေးစိတ်အတွက်ကြော်ငြာကိုသေချာဖတ်ပါ နှင့်ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှသူတို့ကိုယ်သူတို့တင်ပြသူတို့ကတွေ့ဆုံရန်ရမည်ဖြစ်သည်သောလိုအပ်ချက်များကို။
အကယ်၍ သင်သည်အဖြစ်အပျက်အိမ်ရှင်မအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်လိုပါကတစ်နှစ်ပတ်လုံးဖြစ်ပွားသောအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ရပ်များကိုသင့်အားအသိပေးရန်သင့်အားအကြံပြုသည်။ မတူကွဲပြားသောမြို့များမှဖြစ်ရပ်များကိုသင်ရှာနိုင်သည်။ အဘယ်အရာကို entity လုပ်ရပ်ခေါ်ဆို? သင်ဖြစ်နိုင်သည် နောင်လာမည့်အခမ်းအနားများတွင်သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းနိုင်ရန်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းကိုပေးပို့ပါ.
ကွန်ရက်သည်ယနေ့အလုပ်ရှာဖွေရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ အဖြစ်အပျက်အိမ်ရှင်မအဖြစ်အလုပ်လုပ်ရန်လည်းအသုံးဝင်သည်၊ သင်၏အဆက်အသွယ်များ၏ကွန်ယက်၏အခြားအခွက်များသည်ဤအလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်လည်းသင့်ကိုအကြောင်းကြားနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအမှတ်တံဆိပ်ကိုသင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းထက် ကျော်လွန်၍ တည်ဆောက်သည်။ သင်၏အပြုအမူအားဖြင့်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုသင်ဆက်သွယ်ပြောဆိုသည်။ အချိန်တိကျမှုသည်အိမ်ရှင်မအဖြစ်လုပ်ဆောင်သူများအတွက်တာဝန်ရှိကြောင်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤပရိုဖိုင်းသည်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွင်အလုပ်လုပ်လိုစိတ်ရှိရန်လည်းအကြံပြုသည်။ ကွန်ဂရက်ကိုအောင်မြင်စေသည့်အခြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
အဖြစ်အပျက်အိမ်ရှင်မအဖြစ်အလုပ်လုပ်ရန်သင်တန်းတက်ခြင်းအပြင်အများပြည်သူဆိုင်ရာဟောပြောပွဲအလုပ်ရုံတွင်သင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏အကောင်းဆုံးဗားရှင်းကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်အသစ်သောကျွမ်းကျင်မှု, အရင်းအမြစ်များနှင့်အရည်အချင်းများဆည်းပူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ » လေ့လာမှုများ » အလုပ်ထွက် » အဖြစ်အပျက်အိမ်ရှင်မအဖြစ်အလုပ်လုပ်ဘို့အချက်အလက်များ 6